जीवनशैली : स्वास्थ्य Archives - Nalapani
घ्यू कुमारीले गर्छ १६ भन्दा बढी औषधीको काम ! -पुरा पढेर सेयर गर्नुहोस्
के तपाई टेन्सनमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् मुड फ्रेस गर्ने उपाय र खानेकुरा
डा. सन्दीपराज कुँवर भन्छन् :- “हरेक नेपालीको रोग ग्यास्ट्रिकमा ध्यान दिनुपर्ने ६ कुराहरु यी हुन्”
Category Archives: जीवनशैली : स्वास्थ्य
घ्यू कुमारीले गर्छ १६ भन्दा बढी औषधीको काम ! आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ । कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २\_३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने र दुबै दुखेमा दुबैमा हाल्नाले ठीक हुन्छ… Read More »
कहिलेकाँही कुनै घटना परिस्थिति तथा वाध्यता पछि मानिसको मन भौतारिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मन एउटै कुरामा घुमाई रहनुहुँदैन । बरु मन परिवर्तन गर्नुपर्छ, कुनै नराम्रो अनुभव मनमा लिईरहँदा हाम्रो मष्तिष्कमा समेत असर पु¥याउँछ । शरीर तात्छ, मुटुको धडकन बढ्छ र छटपटि हुन्छ । त्यसैले अनावश्यक कुरामा एकोहोरो गहिरो सोचाई नगर्ने । १.अर्काको उपलब्धिलाई सजिलै ग्रहण गर्ने र… Read More »
काठमाडाैँ । मिठो हुने रातो रङको अनारको दाना या जुस सबैले मन पराउछन् । अनार स्वाथ्यको लागि निकै हितकर मानिन्छ । बिरामीहरुलाई अनार बढि खान दिईन्छ । यसले इनर्जी दिने हुँदा असक्त तथा बिरामीहरुलाई दिईएको हो । अनारमा भिटामिन , मिनीरल्स जस्ता तत्वहरु हुन्छ । अनारको जुसले कलेजोको रक्षा मात्र गर्दैन मदिरा वा अन्य पर्दाथले कलेजोमा कुनै प्रकारको… Read More »
काठमाडौ । ग्यास्ट्रिक नेपालीहरुको खानदानी रोग भनिन्छ । धेरै नेपालीले जन्मिदै आमाको कोखबाट नै पोषणको अभावमा लिएर आउँछन् । जन्मिएपछि शिशु अवस्थामा नै नियमित खानपान नहुँदा रोगको शिकार बन्छन् । पछि ठूलो हुँदा छन् खानपानको तालिका नमिल्दा, कोही भएर मिलाएर खान नजान्दा त कोही नभएर खान नपाएर ग्यास्ट्रिकको भागिदार बनेका छन् । हरेक जसोलाई हुने ग्यास्ट्रिकले ध्यान दिन… Read More »
काठमाडौँ – तीनमहिने सुइ । अर्थात एक पटक लगाएपछि ३ महिनासम्म गर्व नबस्ने परिवार नियोजनको अस्थाई साधन । नेपालमा पनि यो सुइ प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ठुलो छ । नेपालमा संगीनी नामको तीन महिने सुइ विक्री वितरण गर्ने कम्पनी नेपाल सीआरएस कम्पनीका अनुसार नेपालमा ६६ लाख भन्दा बढी संगीनी सुइ विक्री भइसकेको छ । तर तीनमहिने सुइले विभिन्न खाले… Read More »